KaOS 2020.09 yakagadziridzwa pamwe nekuvandudzwa kwakadai seLinux 5.7 uye Plasma 5.19.5 | Linux Vakapindwa muropa
KaOS 2020.09 inovandudzwa pamwe nekuvandudzwa senge yepamusoro Linux shanduro 5.7 uye Plasma 5.19.5
Mushure mekuvandudza kwayo, iyo yakatanga mushure mekuburitswa kwe vhezheni yapfuura, Chitatu chekupedzisira, Gunyana 23, KaOS 2020.09. Sezvatinoverenga mu kusunungura chinyorwa, Mwedzi uno vatora mukana wekuvandudza 60% yemapakeji, uye pakati pekuvandudza isu tine akawanda ane hukama nedesktop yako. Kuti zvive zvakanyatsojeka, ivo vakagadziridza KDE Masystems, KDE Kunyorera uye Plasma kune avo azvino vhezheni, asi shanduko hadzina kugara ipapo.
Mukusunungurwa kutsva kwega kwega, tinowanzo taura tsanga yavakaisa, uye mumwedzi miviri haina kuvapa nguva yakawanda mune izvi. Ivo vakasanganisira imwe yeaya akateedzana, asi vabva kuLinux 5.7.8 yeJuly kuburitswa ku Linux 5.7.19 yeKaOS 2020.09, inova yakagadziriswazve vhezheni uye ine mashoma mabhugi uye zvikanganiso zvekuchengetedza. Une mamwe ese akanyanya kunaka nhau mushure mekucheka.
Pfungwa dzeKaOS 2020.09
KDE Kunyorera 20.08.1.
Nyowani Kdiff3 uye Keysmith maapplication.
Network Maneja 1.26.2.
Iyo Midna theme yakagadzirwazve.
Calligra seyakajairwa hofisi app.
Kuvandudzwa kwemukati. Semuenzaniso, dingindira rakazivisa madiki ma tweaks uye SSDM (login) ikozvino inopa musiyano wakagadziridzwa uye nemusoro mutsva zvachose weiyo systemd-bootloader kutsiva dema kumashure.
Installer kugadzirisa. Pakati peizvi, tine mepu inoratidza nzvimbo kana nyika kwatinoda kuisa sisitimu yekushandisa, uye kuisarudza inokurumidza uye yakapusa sekudzvanya pamepu. Iyi yekuvandudza iri mukuwedzera kune iyo yaChikunguru vhezheni iyo yakatotibvumidza isu kuti tisarudzewo iyo keyboard.
Vashandisi varipo vanogona ikozvino gadza iyo vhezheni itsva nemurairo sudo pacman -Syu. Zvekuisa nyowani, iyo KaOS 2020.09 mufananidzo unowanikwa pa Iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » KaOS 2020.09 inovandudzwa pamwe nekuvandudzwa senge yepamusoro Linux shanduro 5.7 uye Plasma 5.19.5
Yese Lenovo Thinkpad akateedzana achave neUbuntu rutsigiro sePre-yakaiswa OS
Caliber 5.0 inosarudza kujoina iyo yakasviba modhi craze uye inosanganisira yakawanda inobatsira kuvandudza